September 29, 2016 – Madaxweynihii hore ee Dowladdii KMG ahayd ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed ayaa wuxuu markii ugu horeysay ka hadlay Heshiiskii is afagaradka ahaa sanadkii 2009 dhexmaray Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, isagoo Shiikh Shariif uu waagaasi ahaa madaxweynaha dalka.
Shiikh Shariif Sheekh Axmed ayaa iska fogeeyay heshiiskaasi, sheegay inuusa waxba ka ogeyn Heshiiskaasi, islamarkaana xumaantiisa iyo samaantiisa wixii ka soo baxa wax laga weydiinaayo Ra’iisul Wasaarihii xilligaasi iyo Wasiirkii Saxiixay Heshiiskaasi.
Madaxweynihii hore ee Dowladii KMG aheyd Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in sababta xilligan doorashooyinka loogu soo aadiyay dooda badda ay tahay arimo ku aadan dhanka Siyaasadda, isaga oo si adag meesha uga saaray inuu wax ka ogaa arimahaasi.
Shiikh Shariif ayaa sheegay heshiiskaasi inuusan cadeynin in Badda Soomaaliya la iibsaday, qofkii akhriyayna uu fahmaayo waxa dhacay inuu yahay Is afagarad dhexmaray labada Dowladood oo kaliya.
Dowladda Hadd Jirta ee Federaalka ayaa Maxkamada Caalamiga ah ee Hague u gudbisay Dacwadda Badda Soomaaliya, kadib markii dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ay ku heshiinwaayeen inay isku afgartaan Xadka Badda ee Labada dal.
September 29, 2016 tuugahaladilo2015